အိုးဝေ: နိပွန်ပြည်မှာ ခရီးသွားမယ်
Posted by ဇနိ at 2:19 PM
nu-san August 21, 2008 at 4:54 PM
မဇနိရေ... တခါတည်း အများကြီးရှင်းပြလိုက်တာ ဖတ်ရတာတော့ မောသွားတာပဲ.. ရေးတဲ့သူတော့ မသိဘူး။ ဟုတ်တယ် ဂျပန်မှာ သွားလာရေးအတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ အမ ရထားလက်မှတ်ကို အဲဒီလောက် အများကြီးတော့ မ၀ယ်သုံးဖူးဘူး။ မှတ်ထားရမယ်။ :)
အရင်တုန်းကဆို နည်းနည်းဝေးဝေးသွားမှသာ subway ရယ် JR ရယ်သုံးရတာ။ များသောအားဖြင့် ရုံးနဲ့ အိမ်က စက်ဘီးပဲ။ အခုမှ ယန်း ၂၀၀၀ ထည့်ထားရင် ၁၂ ခါစီးလို့ရတဲ့ လက်မှတ် ၀ယ်ထားတယ်။ တခါစီးရင် ၂၀၀ ဖြတ်တယ်။ ၂ ခါက အပိုပေးတာ။ အမတို့ဆီမှာက အနည်းဆုံး ယန်း ၂၀၀ ကစတယ်။ ၄ ဘူတာလောက်အထိက ၂၀၀ ပေါ့။ အဲဒါဆိုတော့ ရုံးနဲ့ အိမ်ဆိုရင် ၃ ဘူတာပဲမို့ ၁၂ ခါ စီးရတယ်.. တခြားဟာတွေတော့ ရှိတယ် Pitapa ကတော့ ကြိုက်သလောက် စီးပြီး လကုန်မှ ပိုက်ဆံရှင်းရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ တခါမှ ၀ယ်မစီးဖူးဘူးတော့ သိပ်နားမလည်ဖူးရယ်။ အမက monorail ရထားစီးရင် အသည်းယားတယ်။ မောင်းတဲ့သူမရှိဘဲ ကွန်ပျူတာက အလုပ်လုပ်နေတာ။ ယိုကိုဟားမား sea paradise ကိုသွားတုန်းက စီးရတာ မှတ်မိနေသေးတယ်။ :)
Republic August 21, 2008 at 6:05 PM
မမနိ ပို့စ်လေးဖတ်တော့ မှ ဂျပန် railway တွေအကြောင်းတော် တော်သိလိုက်ရတယ် ၊၊ ခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါ မနိ၊၊
အသက်ကြီး သူတွေဆို မလွယ်ဘူးပေါ့နော် ၊၊
Taungoo August 21, 2008 at 8:30 PM
ဂျပန်မသွားခင် ဒါကိုဖတ်ပါ လို့ပဲ ညွှန်းလိုက်ချင်တော့တယ်
ဘလော့တွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် နိုင်ငံအသီးသီးကရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ခွင့်ရတာ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်
(စကားမစပ်ဗျာ ကိုဇနိရေးတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခုမှာ စာသားလေးကို ကလစ်ထောက်ညွှန်းထားတာလေး တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမေးပေးပါဦး အမရေ)
ဇနိ August 21, 2008 at 9:48 PM
ကိုတောင်ငူအတွက် Link ထည့်နည်း
myatnoe August 22, 2008 at 1:04 AM
ရထားစီးခ အတော်များများက တိုကျိုမှာ အတန်ဆုံး
အခုတော့ လည်စရာကုန်လို့ ဘယ်မှမသွားချင်ပေမဲ့
မြရွက်ဝေ August 22, 2008 at 5:00 AM
စုံနေတာဘဲ မဇနိရေ။ ညီမကို ဒီမလာခင်ကတည်းက pasmo ကဒ် ကြိုလုပ်ပေးထားလို့ လေယာဉ်ကွင်းကနေ အိမ်ကိုအလာကတည်းက pasmo လေးနဲ့လေ။ ညီမက အဲဒီတုန်းက တောသူမြို့တက် အူကြောင်ကြားပေါ့။ ဘာကြီးလဲမသိ နာမည်လဲ ရိုက်ထားတဲ့ ကဒ်ကြီးလို့။ ခုတော့ ဘယ်သွားသွား အတော် အဆင်ပြေပါတယ်။ တချို့ taxi တွေမှာ pasmo သုံးလို့ ရတယ်နော်။ ဟိုတရက် အပြင်သွားမှ သိတာ။ ကြုံလို့ ပြောရဦးမယ်။ pasmo မှာ နာမည်ရိုက်ထားတော့ ဟိုရက်က ပိုက်ပိုက်အိပ်ပျောက်သွားလို့ pasmo ကဒ်ကို သွားပိတ်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ မီတာဖြစ်ဖြစ် အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ စာရွက်ပြပြီး ယန်း ၁၀၀၀တော့ ထပ်ပေးပြီး ပိတ်၊ ပြီးတော့ အသစ်လုပ်ရတယ်။ နာမည်မရိုက်ထားရင်တော့ စာရင်းရှာလို့မရမို့ ပိတ်လို့လဲမရနဲ့ အားလုံးရှုံးပြီ။ ခု ၁၀၀၀ထပ်ပေးပြီး အရင်ကဒ်ထဲက အတိုင်း ကဒ်အသစ်ထဲ ပြောင်းထည့်လို့ရသွားတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အဲဒီထဲက ယန်း ငါးထောင်ဖိုးပါ ပလုံ... စွပ်! ဖြစ်ပြီ။ အမျိုးသားရဲ့ pasmo ကဒ်ထဲမှာ မနိလိုဘဲ teikiken ပေါင်းထည့်ထားတယ်။ အလုပ်သွားရတဲ့ ဘူတာအထိပေါ့။ ရက် ၂၀စာဖိုးလောက် ကျတယ်ပြောတယ်။ တစ်လအတွင်း အခေါက်ခေါက်စီးပေါ့။
တားမြစ် ထားသော... August 22, 2008 at 8:02 AM
မောင်ဖြူ August 22, 2008 at 10:59 AM
မဇနိရေ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးရင်တော့ နီပွန်ကိုလာလည်ဖို့မကြောက်တော့ဘူး။ ကိုဇနိလာရင်တော့ လိုက်လာဦးမှ။
ီDr. Nyan August 22, 2008 at 6:14 PM
Teikiken (လပေးကဒ်) ကို ၆လစာဝယ်ရင် ၁လချင်းစီ ၆ကြိမ်ဝယ်တာထက်တစ်လစာနီးပါးပိုက်ဆံပိုသက်သာပါ
တယ်။ Suica/Pasmo ကို မြန်မာပြည်အပြီးပြန်တဲ့အခါ လက်မှတ်ကောင်တာမှာပြန်အပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားပြနိုင်ရင် ၅၀၀ယန်းပြန်အမ်းပါတယ်ခင်ဗျား။ Seishun 18 Kippu
နဲ့မနှစ်ကနွေခရီးသွားလိုက်တာ၊ ကျိုတို၊အိုဆာကာ၊ဂိဖု၊ ကိုဘေး၊နရ၊ဟာမာမတဆု၊ နဂိုယာ အထိသွားပြီးအပြန်စောနေသေးလို့ ကမာကူရ၊အဲနိုရှီမားအထိဒိုးခဲ့ကြပါတယ်။ အလွန်တန်တဲ့လက်မှတ်ပါ။
မဇနိ August 22, 2008 at 7:33 PM
အစ်မနုစံ မောသွားလားဗျ။ Monorail စီးရတာ အသည်းယားပေမယ့် အိမ်ကလူကြီးနဲ့ မဟုတ်လား :P
ကိုကြီး ၀ီ ရေ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကျ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ် လူငယ်တွေက နေရာပေးတယ်ဗျ။ သူတို့ဆင်းပြီးအောင် သေချာစောင့်ပေးတယ်။
ကွန်းမန့်အတွက် တောင်ငူသားလေးကို ကျေးဇူးနော်
မြတ်နိုးက လည်စရာတွေ ကုန်နေပြီပေါ့ :P
ညီမမြရွက်ဝေ pasmo လေးနဲ့ လာသပေါ့။ ချစ်လိုက်တာနော်။ အားကျပါ့။
ဂျပန်လာမည့် ကိုတားမြစ်ထားသော အတွက်ရေးထားတာနော် ဘယ်တော့လာမှာလဲ
ကိုဇနိနဲ့သာ လိုက်ခဲ့တော့ ကိုမောင်ဖြူ
မြန်မာကိုပြန်ရင် အဲလိုလက်မှတ်ပြန်အပ်လို့ရတာ ခုမှသိတယ် ဒေါက်တာ။ ကျေးဇူးပါ။ သမီးလေးနဲ့တူတူလည်တာဆိုတော့ ပိုပျော်စရာကောင်းမယ်နော်။
khin oo may August 24, 2008 at 4:42 AM
လည်နိုင်သလောက်လည်ပါ ညီမရေ. အခွင်.ရှိတုံး။
မဇနိ August 24, 2008 at 9:53 AM
ဟုတ်ကဲ့ မမခင်ဦးမေ ။ မမတို့ဆီလည်း လာလည်မယ် ကွယ် ကွယ် ကွယ်